को’रोनाविरुद्ध ल’ड्न नेपाललाई विश्व बैंकको ३ अर्ब ५३ क’रोड रुपैयाँ सहयोग! शेयर गरौं । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
को’रोनाविरुद्ध ल’ड्न नेपाललाई विश्व बैंकको ३ अर्ब ५३ क’रोड रुपैयाँ सहयोग! शेयर गरौं ।
काठमाण्डौ – को’रोना भा’इरसविरुद्ध लड्न वि’श्व बैंकले नेपाललाई फा’स्ट्रयाक विधिमार्फत २९ मि’लियन डलर अर्थात झण्डै ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
सहयोग सम्झौतामा आज अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र विश्व बैं’कका देशीय निर्देशक फे’रिस ह’डाड जार्भोले ह’स्ताक्षर गर्नुभयो ।
को’रोनाबाट बच्न पूर्वतयारी र सा’र्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन विश्व बैं’कले यो र’कम नेपाललाई दिएको हो ।
यो र’कम विश्व स्वा’स्थ्य सं’गठनको मा’पदण्डअनुसार व्यक्तिमा कोरोनाको प’रीक्षण बढाउन, स’ङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा रहेकाको खो’जी अर्थात क’न्ट्याक्ट ट्रे’सिङ, आ’ईसीयू कक्षको विस्तार र देशैभर आ’इसोलेसन कक्षको वि’स्तारमा खर्च हुनेछ ।
यस्तै स्वा’स्थ्यकर्मीले लगाउने प’र्सनल प्रो’टेक्टिभ इक्युपमेन्ट पीपीई खरिद र ल्याब विस्तारमा पनि रकम खर्च हुनेछ । विश्व बैंकले विकासशील देशहरुको लागि को’रोनाविरुद्ध लड्न १४ बिलियन अमेरिकी ड’लरको फा’ष्ट्रयाक सहयोग प्याकेज घो’षणा गरेको छ।
Previous काठमाडौँ मै प्रहरी, एम्बुलेन्स चालक र डाक्टरले छुन मानेनन्, २८ वर्षीया युवतीको गयो ज्या’न !
Next बिल आउँदा तिर्दिन भन्न नपाइने, ब्याजको स्या’ज जोडिए जस्तो खोइ ॠ’ण पनि कस्तो हो कस्तो : राम प्रसाद खनाल